यी पाँच बलिउड कलाकार जो "सरोगेसी " बाट बाआमा बने - VOICE OF NEPAL
यी पाँच बलिउड कलाकार जो “सरोगेसी ” बाट बाआमा बने
२६ माघ २०७५, शनिबार १७:४० 216 ??? ???????
अभिनेता तुषार कपुरले बिहे गरेका छैनन्। तर, सन् २०१६ मा उनी एक छोराका बुबा बनेका छन्। सरोगेसीबाट उनको छोरा लक्ष्य जन्मेको हो।
उमेरको दुरी धेरै नै भएका बलिउडका चर्चित जोडीहरु